Ny Kolontsaina Hawaii ve dia entam-barotra azo amidy amin'ny alàlan'ny fizahantany?
Home » Hawaii Travel News » Ny Kolontsaina Hawaii ve dia entam-barotra azo amidy amin'ny alàlan'ny fizahantany?
Aprily 10, 2021
Hawaii dia manoratra indray ny fitomboan'ny isan'ny mpitsidika na dia eo aza ny areti-mandringana ankehitriny, saingy manana ahiahy fanampiny ny Lehiben'ny fizahan-tany Hawaii Jon de Fries. Hitany fa ny kolontsaina Hawaii dia nihena indray ho entam-barotra fotsiny, ary miady amin'ny Antenimieram-panjakana Hawaii noho ny fibaikoany ny hetra mandalo onitra.
Androany dia nanatri-maso ny kolontsaintsika Hawaii isika fa nihena indray ho entam-barotra tsotra azo amidy amin'ny soavaly, ary tokony hatsahatra io fironana sy endrika tantara io - ary hijanona izany, amin'ny fijeriko ao amin'ny HTA (Hawaii Tourism Authority)
Ny teny toa izany dia tsy avy amin'ny fiambenana ara-kolontsaina na tontolo iainana, na fikambanana manohitra ny orinasan'ny mpitsidika, fa avy amin'i John De Fries, lehilahy tompon'andraikitra amin'ny fananganana indray ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Hawaii.
Jereo ny fampidiran-dresaka nataon'i Patricia Herman, VP an'ny Marketing ho an'ny HTA natolotra ny Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN) tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. WTN dia dinika manerantany miaraka amin'ireo mpitarika fizahan-tany amin'ny firenena 127
Rosia nahomby tamin'ny fitsapana ny fiaramanidina mpandeha vaventy vita Sovietika voalohany
Lanitra misavorovoro ho an'ny sidina India
44 minitra lasa izay